महासचिव खगेश्वर शर्मालाई स्वदेश विदाई, ठाकुर खनाल का.वा. महासचिव - NepaliEkta
महासचिव खगेश्वर शर्मालाई स्वदेश विदाई, ठाकुर खनाल का.वा. महासचिव
8037 जनाले पढ्नु भयो ।
नयाँ दिल्ली, ११ जुलाई । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ । बैठक पछि अध्यक्ष दुर्गा बहादुर केसीले प्रेस वक्तव्य जारी गर्नु भएको छ । केसीद्वारा जारी वक्तव्यमा बैठकले लिएका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।
सर्वप्रथम वैश्वीक महामारीको रुपमा फैलिएको कोराना भाईरस संक्रमण कारणले ठूलो संख्यामा भारतस्थित नेपाली श्रमिकहरू पनि संक्रमित भएको र कतिपय श्रमिकहरुको मृत्यु समेत भएको छ । बैठकले मृतकहरूप्रति शोक, समवेदना र संक्रमितहरूको सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना प्रकट गरेको छ ।
“संगठनमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनु भएका महासचिव खगेश्वर शर्मा स्थायी रूपमै संगठानिक जिम्मेवारी अनुसार नेपाल जानु भएको हुँदा वहाँले संगठनलाई आजसम्म दिनुभएको योगदानप्रति स–धन्यवाद बिदाई गरिएको छ ।” अध्यक्ष केसीद्वारा जारि वक्तव्यमा लेख्नु भएको छ– “रिक्त महासचिवको स्थानमा कार्यवाहक महासचिवको रुपमा ठाकुर खनाललाई चयन गरिएको छ ।”
अध्यक्ष केसीले कतिपय भारतीय समाचार माध्यम, प्रिन्ट मिडीया या टेलिविजन एवं युट्युब च्यानलहरूले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमको बारेमा सत्यतथ्य रिपोटिङ्ग नगरेको वक्तव्यमा जनाउनु भएको छ । “कपोलकल्पीत भ्रामक र भड्कावपूर्ण समाग्रीहरू प्रस्तुत गरि नेपाल तथा भारतका जनता बीचको मित्रतालाई तोडने दुस्प्रयास भइरहेको छ । हामी भारतीय मिडीयाहरूको भड्कावपूर्ण, अमर्यादित, असभ्य दुसप्रचारको तिव्र भ्रत्सना गर्दछौं ।” केसीले अगाडि लेख्नु भएको छ : “साथै कतिपय समाचार च्यालनहरुले प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आशिन व्यक्तीको चरित्र हत्या गर्ने कामसम्म गरेका छन्, उक्त कार्य आपत्तिजनक छ । हामी दिल्लीस्थित कुटनैतिक नियोग नेपाली राजदुतावास र नेपाल सरकारसँग त्यसप्रकारको चरित्र हत्यामा संलग्न पक्षहरुलाई कडा कार्यवाही गर्न समेत माग गर्दछौं ।”
← विपदबाट बच्न ग्रामीण बस्ती विकास गर्नु पर्ने राजमोको ठहर
पुँजीवादी व्यवस्थामा परिवारको स्वरुप →
चिदम्बरममा मौसमी चन्दा अभियानको रुपमा देउसी भैलो सम्पन्न